ဖြေးဖြေးလုပ်ပါလား …မောင်ရယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖြေးဖြေးလုပ်ပါလား …မောင်ရယ်
Posted by fatty on Jul 2, 2011 in Creative Writing, Critic, News | 20 comments
စာရှုသူများသို့ ကြိုတင်ပြောလိုသည်မှာ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး အတွေးမချော်ကြဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မောင် … ဆိုသောအသုံးအနှုံးမှာ ယောကျာင်္းလေးက မိန်းကလေးကိုခေါ်သော .. မောင် .. ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပျော်သလားဟေ့ မောင်တို့ရေ … ပျော်တယ်ဟေ့ ပျော်တယ်ဟေ့ … ဆိုသော မောင် …ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေးချင်သော အကြောင်းအရာကတော့ … ဒီကနေ့စနေနေ့ ကျနော့ ဟန်းစက် slide ကြိုးပြတ်လို့
hand set ရောင်းသော servicing ပါရသော ဆိုင်တဆိုင်သို့သွားပြင်၏။ ဆိုင်ရှေ့ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွင်
GSM internet လိုင်းအမြန်ရအောင် လျှောက်ပေးသည် ၂၀၀၀၀ ကျပ် ဟူ၏။
တရားဝင်တန်းစီပြီးလျှောက်လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်သွင်းရပါသည်။
internet ရမည်ဆိုတော့ ရန်ကုန်တမြို့လုံးကလူတွေ ၀ိုင်းတိုးကြတော့၏။ တန်းစီထားရသည်မှာ မနက်အစောကြီးကထဲက
မိုးရွာထဲ လဲစီ နေပူထဲလဲစီနေကြရသည်။
လျှောက်လွှာတင်ပြိး ချက်ခြင်း လုပ်ပေးကြပါသည်။ ပြဿနာမှာ ကိုယ့် handset နှင့် ကိုယ်မရ handset အသစ်ဝယ်ရသည်။
အဲဒါလည်း ကြိုတင်ပြောမထား ..။ software ရိုက်ထဲ့ရသေးသည် အဲလိုလဲ ကြိုတင်ပြောမထား။
လူတွေက ၁၀၀၀၀ ကျပ် သွင်းပြီး သုံးလို့ရပြီထင်ကြသည်။ မှန်းချက်နှင့် နှမ်း ပဲ ပြောင်း ထွက်မကိုက်သောအခါ ဘာလုပ်ကြရမှန်းမသိတော့။
handset ဆိုင်တွေစားပြီပေါ့ … သူတို့က သိကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများ handset ဆိုင်များသို့ပြေးကြရပြန်သည်။
edge ပါသော handset များသာ internet သုံးလို့ရမည်ဆိုတော့ ၀ယ်ကြရပြန်သည်။ သူများနိုင်ငံလှမ်းမေးတော့
3G ပါသော handset မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ edge က ငါတို့ဆီမှာ date အောက်နေပြီတဲ့။ line ကလည်း edge ဆိုရင်နှေးပါသတဲ့။
လူတွေကတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ တရားဝင် ဘာသုံးပါလို့လဲ ကြေငြာထားတာမရှိ အရူးတွေလို ဖြစ်နေကြပြီ။
ကဲ နောက်ဆုံး ကျနော် ဖုံးပြင်သော ဆိုင်သို့ internet လျှောက်ပေးပါ ကျမတို့ တန်းမစီနိုင်လို့ပါ ၂၀၀၀၀ ပေးချင်ပေးရပါစေ
ဆိုင်ရှင်ကလည်း လက်ခံ၏။ သူတို့မသိသေးသော နောက်ပြဿနာ တခုမှာ …………………..
internet လျှောက်လွှာများကို သောကြာင်္နေ့ ညနေပိုင်းကထဲက ရပ်နားလိုက်ပြီ ဆိုသော သတင်း ..။
တိုင်ပြည်ကြီးခေတ်မီအောင်တော့လုပ်နေကြပြီထင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါမောင်တို့ရယ် …… လို့သာပြောချင်ပါသည်။
………………..ရဲ့ ဘေးအန္တရယ်နှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ကို ခံစားနေရသော လူသတ္တဝါတွေ၊
ဘေးဒုက္ခအန္တရယ်များကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ…
Please fill in the blank?
ဦးဖတ်က ဖြေးဖြေး လုပ်စေချင်လို့လား.. ဖြေးဖြေး လုပ်နေရင်သူများတွေ ကျော်တက်သွားမှာပေါ့.. ခေတ်နဲ့ အမှီ လိုက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါပဲ
အော်…. အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။
တကယ် ကတော့ internet တက်လို့ရမရ က handset နဲ့သာဆိုင်ပါတယ် ။ handset အသစ်ဝယ်ရုံပါပဲ ဘာGSM ဖုန်းမှာ internet ရဖို့ တစ်သောင်း ၊ နှစ်သောင်း အပို ထပ်ပေးစရာ မလိုပါ ဘူး ။ နောက်ပြီး ဖွင့်ပေးပြီး သောကြာ နေ့မှာပိတ် တယ် ဆိုတဲ့လုပ်ထုံး ကလဲနားမလည် စရာပဲ ။့ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် နဲ့ ။ဒါဆို ရန်ကုန် မှာ touch-phone နဲ့ facebook တခါထဲ တက်လို့ရတော့မယ်ပေါ့ ။ ကောင်း ၏ ။
internet တက်လို့ရတယ်လို့ ပြောသံတော့ ကြားနေတာပဲ။ တက်လို့ရတာ မရတာထက် လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ဖုံးပြောလို့ရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဟဲလို- ကြားလား ကြားလား ကြားလား လား လား လား လားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
လုပ်စားတတ်ကြပုံ များနော် ။ အတုယု စရာပဲ မလား ရွာသူရွာသား တို့ ရဲ့ ။ ရပ်ပါလေး မောင်ဂျေးမှီ သီချင်း အလို ရ ဆိုရင် ` နောင်ဖြစ်မှ နောင်ရှင်း ´ ပေါ့ ။
အကောင့်ဖွင့်ခ 10000 ကနေ 5000 ကိုဈေးချလိုက်ပြီ ဟိုဗျာ အလကား ဖြစ်သွားပြီ လာတန်းစီး ယုံပဲဆိုရင်တောင် မသွားဘူး လိုင်းကလဲမကောင်း (ကောင်းတယ်လိုပြောရအောင်လဲ) ဟိုဟာကပိတ် ဒီဟာကပိတ် ပြီးတော့ ဖုန်းဆိုတာ ကလဲ သေးသေးလေ ကြည်ရတာ အားမရဘူး ဖုန်းဘေက ပိုတက်ပြီး ရလိုက်တာက ငါတို အစိုးရငါတိုရှိ ကငွေ မလှိမ့်တပတ် ယူသွားတယ်ဆိုတာပဲ
စိတ်ပျက်စရာပဲ… ဘယ်တော့မှ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြီး လူတန်းစေ့ သုံးနိုင်မှာလဲ…?
မောင်တို့ကလည်း အမျိုးမျိုးပဲ။ လုပ်တော့လည်း မြန်လို့၊ မလုပ်တော့လည်း ကြာလို့။ အဘတို့က အလုပ်များတယ်ကွ၊ နဲနဲပါးပါး အဖိတ်အစင်တော့ ရှိမှာပေါ့။ မကျေနပ်လို့ အဘတို့နေရာ ဝင်လုပ်ချင်ရင် အချိန်မရွေးပဲ။ အဲ…ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့လို့ နိုင်မယ်ဆိုရင် ပြောတာနော်…
အဲဒီ service ကို ဘယ်သူကပေးတာလဲ..
အဲဒီကရတဲ့ ၀င်ငွေတွေ ဘယ်မှာလဲ… ဘာလုပ်ပစ်ကြလဲ..
အထင်ကြီးတာနဲ့ .. အထင်ကြီးခံချင်တာ ၀ါသနာပါတယ်…
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ CDMA ကွန်ရက်တွေက ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေက ကိုင်ထားတာလဲ…
ဘယ်နိုင်ငံတွေက ဘယ်လိုပင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်လုပ်….
နိုင်ငံတွင်းမှာ ပိုက်ဆံရှာလို့ ရနေတာပဲ… သူတို့ကအေးဆေးပေါ့..
ပိုက်ဆံ မရှိဘဲ လုပ်ချင်တာလေးတွေရှိရင် ..သူတို့ ပထွေးဆီကနေ အကြွေးယူမယ်..
ရလာတဲ့ အမြတ်ကို သုံး… ပေးစရာရှိတဲ့ အကြွေးကြတော့ ပြည်သူကဆပ်ပေါ့…
ကြောက်ရင်လွဲ.. ရဲ မင်းဖြစ်ပါ….
အဲဒီ အကြောက်တရားကြီးတာရယ်.. ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းတာရယ်..
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းတာရယ်နဲ့ပဲ… စစ်ကျွန် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်…
စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း… စစ်စနစ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ.. သူတို့ကိုယ် သူတို့ အဟုတ်ထင်…
တော်သေးတာပေါ့ လေးဖက်ရယ်……… ဖုန်းဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတုန်းမို့…. ဖုန်းမရှိရင် ခေတ်မမီဘူးဆိုရင်တော့ မနောတို့ကတော့ ရှေ့ဆုံးက ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုကလည်း သတင်းက ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးဆိုတော့လဲ…… ဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာကို လိုက်မမှီတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက် ခုတစ်သောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေက ကွန်နက်ရှင်က အတော်ကို ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်။ နောက် ဖုန်းထဲပဲသုံးတာတောင် အဆင်မပြေဘူးတဲ့။
အဲဒိလို အစုတ်ပလုတ် တွေ ထုတ်ပေးပြီး ငွေတွေပြန်သိမ်းနေတာ လူခွန်ကောက်နည်းတစ်မျိုးပဲ..။
အရင်တပ်မတော်အစိုးရက.. တရားဝင်မဟုတ်တော့.. လူတွေဆီကအခွန်(တည့်တည့်)ကောက်လို့မရဘူးလေ…။
ဆိုတော့.. အစိုးရအဖြစ်တက်လုပ်ရာမှာ ကုန်ကျတဲ့စရိပ်တွေကာမိဖို့… နည်းမျိုးစုံနဲ့… လူထုဆီကငွေတွေသဲ့ယူရတာပေါ့..။
မလောက်ဘူးထင်ရင်.. သယံဇာတတွေရောင်း ငွေရှာရတာပဲ…။
ပါမစ်တွေနဲ့…ငွေထွက်လာမဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်..ဥပဒေကို အတင်းအလျှော့ ကစားပြီးယူရတယ်….။
ဒါက. နှစ်ကြာလာတော့.. အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပိုင်းတန်းကလူတွေအတွက်… လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလို့ထင်သွားပြီး… ဒီနည်းတွေကို ထပ်ခါ..ဆက်ခါသုံးတော့တယ်…။
အမြတ်များဖို့… တခြားနိုင်ငံက နည်းပညာအောက်ကျကျန်ရစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို .. မသိနားမလည်တဲ့ လူထု ထိုးရောင်းတာက… တခုပေါ့..။
အခုအစိုးရသစ်က… သိနားလည်ပြီး.. လျှော့ချလာမယ်လို့..မျှော်လင့်မိပါတယ်..။
ဂယ်လား ဦးခိုင်ရယ်။ သဂျီးပြောသလို တရားဝင်လာတဲ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ နယ်စပ်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တာကြတော့ရော ဘယ်လိုဆင်ခြေ ပေးမှာတုန်း။
အခုအစိုးရသစ်က… မသိနားမလည်သေးလို့.. ဖြစ်တာလို့.. မျှော်လင့်မိပါတယ်..။
ထောက်ပန့်လိုက်ရင် နှစ်ဆယ့်နှစ် ဒေါ်လာ တောင်ရသွားနိုင်တယ်
ဒါ့ကြောင့် ဘကြီလူဝ ရဲ့ပညာတွေကို
ကျွန်တော် တိတ်တစ်ခိုးလေး လေ့လာနေတာ
ကျွန်တော်လည်း ဘကြီးလူဝလို ဖြစ်စေရမယ်
ကိုကြောင်ကြီးရေ … အဖိတ်အစင် ဆိုတာတော့ရှိတာပါဘဲ …။
ကော်ဖီတခွက်ဖျော်ရင် ၃ ပုံ ၂ပုံလောက်က ဖိတ်တယ် စင်တယ် …..။
အဲဒီဖိတ်တာစင်တာလေးတွေ စားပွဲပေါ်ကျလို့ ညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီး သုပ်မယ်လဲလုပ်ရော
အဲဒီအဖိတ်အစင်က ရှာလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူး …..။
အိပ်ထဲဖိတ်ကျ စင်ကျတာကိုး ……။
အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုလျှင် တမိနစ်ကို လေးကျပ်သာပြောတယ်… ။ ဖုန်းနဲ့ သုံးလျှင် web ဖွင့်ကတည်းက ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲ ငါးဆယ် အရင်ဖြတ်လိုက်တယ်…. အဲ့ဒီအချိန် the page can’t be … နဲ့ တိုးလျှင်တော့ …refresh သာပြန်လုပ်… ၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါနဲ့ web ကိုပိတ်ပြီး နောက်တခါပြန်မဖွင့်လေနဲ့ … စက္ကန့် ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတောင် web တခါဖွင်လျှင် ငါးဆယ် … နှုတ်သွားပါကြောင်း …နောက်တခါ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လည်း ထပ်နှုတ်ပါကြောင်း … အဲ့ဒါက အင်တာနက်သုံးတဲ့ အချိန်ပေါ် နှုတ်တာနဲက မဆိုင်ဘူး … အင်တာနက်သုံးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး web ဖွင့်တာနဲ့ ဆိုင်တာတွေ့ရကြောင်း … လေ့လာမိတာလေး ဖွလိုက်တာပါ … ။
အခုက လိုင်းကလဲ စုတ်လဲသာလွန်ပါရော သုံးမယ်ဆို ဖွင့်လိုက် လိုင်းက မတက်လိုက်နဲ့ အဆင်မပြေသာက များပါတယ်